Yiziphi izincomo ze-SEO ezingathuthukisa izindawo zami zesayithi ku-Google?
Namuhla, uma ufaka umbuzo "we-SEO izincomo" ebhokisini lokusesha, uzothola amakhulu ezinkulungwane zezimpendulo ezifanele ezingaphendula umbuzo wakho. Kodwa-ke, kukhona okuningi okungalungi kwe-intanethi uma kuziwa ekusesheni kwenjini yokucinga. Njengoba i-optimization sphere ifunwa kakhulu, abaningi abangewona ochwepheshe banquma ukubhala izihloko kanye nezifundiso mayelana nakho ukuheha abasebenzisi abaningi kuzizinda zabo - oculos ray ban aviator preo. Khumbula ukuthi izincomo zokuthuthukisa ikhwalithi ezinjalo zingahle zidibanise abanikazi bewebhusayithi kuphela kodwa futhi zilimaze isikhundla sabo sesayithi.
Akufanele uthembe okuthiwa "ochwepheshe be-SEO" ngaphandle uma bengenzi abahlinzeki benkonzo yokulanda injini. Kuphela, kulokhu, banolwazi olwanele nolwazi ukukunika iseluleko se-SEO. Enye yezinkinga ezinkulu abaphakathi abasebenzisi ababhekana nazo lapho befuna izincomo ze-SEO ukuthi abazi ukuthi iyiphi ulwazi abayidingayo ukuzithemba. Ukukhathazeka okusemthethweni. Udinga ukuhlola njalo noma yini oyitholayo kuyi-intanethi ngaphambi kokuyamukela njengomqondo omuhle wokwenza kahle. Kulesi sihloko, ngingathanda ukwabelana ngethiphu yami yokusebenza yokusebenza nge-search engine esebenzayo ngibheke ulwazi lwami.
Ukusebenza ngokuphumelelayo kwe-SEO
Ucwaningo lo mncintiswano
Ukwenza ukunqoba umkhankaso wokwenza ngcono, udinga ukuhlaziywa kwemakethe nokucwaninga komncintiswano. Ngakho qalisa ngokuphequlula inetha ngamagama angukhiye afanelekayo ku-niche yakho yemakethe. Bese ubheka yonke imiphumela ekhasini lokuqala le-Google, unganaki noma yimiphi imiphumela yesikhangiso ku-TOP. Wonke amawebhusayithi afakwa ekhasini lokuqala le-SERP yizimncintiswano zakho ze-market niche. Hlola ukuthi yiziphi izinyathelo zokuphromotha abancintisanayo abazisebenzisayo nokuthi yini elahlekile. Ungesabi ukuboleka amanye amaqhinga okuwina kusayithi lakho bese udala isu ukuthi ungaphuma kanjani abaphikisana nabo.
Yakha uhlu lwamagama angukhiye.
Isinyathelo esilandelayo ngemuva kokuhlaziywa kwabathengi ukucwaninga ngegama elingukhiye. Udinga ukukhetha amagama okusesha nemisho ofuna ukuthunyelwe ukuze uboniswe. Kumele kube okufanele kakhulu emibhalweni yakho yokusesha ibhizinisi okungenzeka amakhasimende akho angasebenzisa ukucinga imikhiqizo noma amasevisi afana neyakho. Ngineluleka ukuthi ugweme imishwana ebalulekile yokuncintisana futhi ejwayelekile njengoba cishe isetshenziselwa izizinda ezindala ezimisiwe. Yingakho udinga ukukhetha amagama okucinga okude okuncintisana nokuncintisana angakulethela ithrafikhi yekhwalithi. Indlela elula yokwenza isiphakamiso segama elingukhiye isebenzisa i-Google Keyword Planner noma amanye amathuluzi wamahhala we-free atholakalayo ku-intanethi.
Yakha okuqukethwe okungcono kakhulu
Mhlawumbe uzwe umbono wokuthi okuqukethwe. Lapha, ngizozama ukukuchazela ukuthi kungani. Okuqukethwe yisici esibaluleke kunazo zonke se-SEO esingadingi isipiliyoni sobuchwepheshe. Ukuqukethwe kwewebhusayithi yinto yokuqala abasebenzisi abakugcina lapho bevula isayithi lakho. Ngamanye amazwi, yinto yokwenza injini yokusesha eyenza ukuqala kokuqala. Yingakho okuqukethwe kwakho kufanele kube, okokuqala, ngokugcwele okuhambisana niche yakho yemakethe. Okwesibili, kufanele kube okuyingqayizivele njengoba kungekho phuzu eliphinda lwazi ulwazi lwabadlali bakho bemakethe ye-market. Okwesithathu, kungumqondo ohlakaniphile ukubhala ezindabeni zezindaba ezisemqoka ezingase zibe nesithakazelo kubasebenzisi. Ukuze uthuthukise ukuqwashisa kwe-brand yakho nedumela le-intanethi, udinga ukuba uchwepheshe embonini yakho bese wabelana nabasebenzisi ngaleyo mfanelo nolwazi oluyingqayizivele abangeke bawuthole kuphi. Qinisekisa ukuthi konke okuqukethwe kwakho kuhlaziya ngokuqondile ngamakhasimende akho.